पसिनाको समस्या र बच्ने उपायहरू | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← डिस्कोमा तीज!
‘Visit to work Visa’ may be stopped →
पसिनाको समस्या र बच्ने उपायहरू
Posted on 22/07/2011 by राजु गुरुङ्ग | टिप्पणी छोड्नुहोस्
– मीना बज्राचार्य
गर्मीको मौसम पसिनाले सताउने मौसम । गर्मीमा पसिना नआउने को होला ? बाहिर जाँदा होस् वा घरमै बस्दा होस्, खलखल पसिना बगेर शरीरलाई नै अल्छी बनाउँछ । त्यत्ति मात्र कहाँ हो र ? पसिनाको गन्ध र पसिनाको एलर्जीले शरीरमा घाउ खटिरा निस्केर सिर्जना हुने थप समस्या त छँदैछ । पसिनाले काखी र पैताला गन्हाएर झन बस्न सकिँदैन ।
कसरी आउँछ पसिना ?
पसिना आउनुका विभिन्न कारण छन् । गर्मीमा घामले गर्दा पसिना आउनुका अतिरिक्त अरू नै कारणले पनि पसिना आउन सक्छ । जस्तै, बढी बल पर्ने काम गरेमा, बढी टेन्सन भएमा, उत्तेजित भएको अवस्थामा र ग्याँसले गर्दा पनि पसिना आउन सक्छ । पसिना आएपछि शरीरलाई विशेष स्याहारको खाँचो पर्दछ । सरसफाइमा ध्यान दिइएन भने शरीरमा गन्ध त आउँछ नै र एलर्जीले थप समस्या पनि देखा पर्नसक्छ ।
खास गरेर छालाको श्वत ग्रन्थीहरू शरीरको भित्री भागमा, हत्केलामा र खुट्टाको पैतालामुनितिर बढी मात्रामा हुन्छन् । ती श्वत ग्रन्थिहरु सक्रिय भएपछि बढी पसिना निस्कन्छ । यसरी निस्केको पसिना वाष्पीकरण भएर जान नसकेमा गन्ध आउन थाल्छ र विभिन्न समस्या देखा पर्दछन् । त्यस्तो स्थिति छ भने समस्याबाट मुक्ति पाउन केही उपायतिर पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
गर्मी मौसममा बढी नै पसिना आउने हुन्छ । त्यसैले अरू बेलाभन्दा गर्मी मौसममा शरीरको सफाइमा बढी नै ध्यान दिन आवश्यक छ । सकेसम्म नियमित रूपमा नुहाउनुपर्छ । नुहाउँदा शरीरका सबै भागको सफाइ गर्नुपर्छ । नुहाइसकेपछि एक मग पानीमा एउटा कागतीको रस निचोरेर हाल्ने र त्यो पानीले जीउ पखाल्ने गरेमा शरीरमा पसिनाको गन्ध आउने समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । बाहिरबाट घर आएपछि चिसो पानीले हातमुख र खुट्टा धुने गर्नुपर्छ ।
नुहाइसकेपछि शरीरमा राम्रो कम्पनीको टेलकम पाउडर दल्नुपर्छ तर बढी मात्रामा यसको प्रयोग भने गर्नु हुँदैन । यसले शरीरका छिद्रहरू बन्द गरिदिन सक्छ । फलस्वरूप शरीरको विकार बाहिर निस्कन पाउँदैन र थप समस्या पैदा गर्छ । त्यसैले ठीक मात्रामा मात्र यसको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
नुहाउनुअघि लगाइएको लुगा नुहाइसकेपछि लगाउनु हुँदैन । पहिलेकै लुगा लगाएमा पसिनाको गन्ध आउन सक्छ । त्यस्तै, पहिले लगाइएको लुगा नधोइकन दराजमा राख्नु पनि हुँदैन ।
आफूले लगाउने लुगामा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । जस्तै, गर्मी मौसममा शरीरमा टाँसिने, कसिने वा सिन्थेटिक लुगा सकेसम्म नलगाउने । कालो वा गाढा रङ्को लुगा पनि नलगाउने । यो मौसममा सुती कपडा लगाउँदा सजिलो र आरामदायी हुन्छ । त्यस्तै, हलुका फिका रङ्को र हावा आवतजावत गर्न मिल्ने खुकुलो खालका लुगा छान्नुपर्दछ । यसले पसिना पनि सोस्न सक्दछ ।
काखी गन्हाउने समस्या छ भने दिनहुँ चिसो पानीले काखी धोएर मात्र लुगा लगाउनुपर्छ । बजारमा बास्ना आउने विभिन्न प्रकारको डियोरोलअन पाउडर, डियोस्टिक, डिओडोरेट वा एन्टिपरस्पायरेटन आदि जस्ता कस्मेटिक सामानहरू पनि किन्न पाइन्छ । त्यस्ता सामानको प्रयोग गर्न विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । राम्रो गुणस्तरको कम्पनीको मात्र प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । यस्तै, यस्ता सामान एकपटक प्रयोग गरिसकेपछि अर्को पटक प्रयोग गर्न पहिले राम्रोसँग काखी धोएर मात्र गर्नुपर्छ । नत्र एलर्जी भएर झन् समस्या थपिन सक्छ ।
कस्मेटिक सामान किन्न बजेटले नभ्याएमा घरमै फिट्किरीलाई खलमा पानी अलिकति हालेर घोट्ने र त्यसलाई काखीमा दल्ने । सुकेपछि लुगा लगाउने । यसले पनि काखी गन्हाउने र काखीमा पसिना आउने समस्याको समाधान गर्दछ । फिट्किरीको घोलले हात र खुट्टा धुने गरेमा पनि पसिनाको गन्धबाट छुट्कारा पाइन्छ ।
पसिना आएमा हात पुछ्ने काम गर्नु हुँदैन । अरूले प्रयोग गरेको वा पसिना पुछेको रुमालको नै प्रयोग गर्नु हुँदैन । बरू पसिना आएमा बेग्लै रुमाल वा टिस्यु पेपरले मात्र पुछ्नुपर्छ । बाहिर जाँदा छाता ओढ्ने र घाममा सन ग्लासको प्रयोग गर्ने गर्नुपर्दछ । यसले शरीरमा घामको असर सीधै पर्न दिँदैन ।
खुट्टाको पैतालामा बढी मात्रामा पसिना आएर समस्या उत्पन्न गरेको छ भने जुत्ता लगाउनु अघि बरफको टुक्राले दल्ने गर्नुपर्छ । त्यसपछि टेलकम पाउडर दल्ने र त्यसपछि मात्र मोजा र जुत्ता लगाउने गर्नुपर्छ । ओपन जुत्ता वा चप्पल लगाउन पनि सकिन्छ ।
अनुहारमा बढी पसिना आएमा मुल्तानी माटो एक चम्चामा आधा कागतीको रस हालेर लेप तयार पार्ने । त्यसपछि यसलाई अनुहारमा १५ मिनेट राख्ने । अनि चिसो पानीले धुने गरेमा पसिना आउने समस्याबाट मुक्ति मिल्छ । त्यस्तै गर्मी मौसममा पसिनाबाट मुक्ति पाउन गाजर र काँक्रोको रस अनुहारमा लगाउन पनि सकिन्छ ।
गर्मी मौसममा बढी पसिना आएर शरीरको पानी बग्ने हुनाले शरीरमा पानीको बढी आवश्यकता पर्दछ । त्यसैले दिनको दुईदेखि तीन लिटर पानी पटक पटक गरी पिउनुपर्दछ । फलफूल र हरियो सागसब्जी तथा प्रशस्त झोल पदार्थको सेवन गर्नुपर्दछ । सादा, हल्का र ताजा खाना खाने गर्नुपर्दछ । अरू पेय पदार्थभन्दा पानीमा नै जोड दिनुपर्दछ ।
यी कुरामा ध्यान दिइएमा गर्मीमा पनि ताजा, फुर्तिलो र निरोगी होइन्छ । साथै, पसिनाको समस्याबाट पनि मुक्ति मिल्दछ ।